Chii chirimo? Iri kupi? Sei? Webhu Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Mugovera, March 1, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Paunenge uchizovhura chitoro, iwe sarudza pekuisa chitoro, chii chaungaisa muchitoro, uye unoendesa sei vanhu kwachiri. Kuvhura webhusaiti, zvisinei kana iri nzvimbo yekutengesa, inoda nzira dzakafanana.
Chii chichava muwebhusaiti yako?
Webhusaiti yako ichavepi?
Vanhu vangaiwana sei?
Chii chichava paWebhusaiti yako?
Tenda kana kwete, pane makiyi maviri ekuchengetedza chitoro. Vazhinji vanhu vanoteerera kune akakosha, izvo vanhu vanotenga. Yechipiri haina kunyatso kuoneka, hazvo. Ndozvinotaurwa nevanhu nezvazvo. Muenzaniso? Ini ndinowanzoenda kune imwe nzvimbo yekutengesa kofi. Ivo vane zvese zvinoda kofi anoda - nharaunda yakasununguka, vashandi vakakura, vanhu vakakura uye chikafu chikuru.
Iyo kofi shopu inopa zvimwe zvinhu, zvakadaro, izvo vanhu vanotaura nezvazvo. Vanopa mimhanzi mhenyu neChishanu neMugovera. Vane mifananidzo yakanaka pamadziro ese ayo vashanyi vanogona kutenga. Uye vane nzvimbo yakawanda yemapoka ekushanyira nekusangana - saka vanobata Chamber of Commerce misangano, Vanonaya mvura, Mapoka eChechi, Nhetembo husiku, nezvimwe.
Iyo kofi shopu inoita chaizvo mushe! Kofi chete yaizochengetedza bhizinesi ravanaro - asi pasina bhajeti rekushambadzira, ndizvo zvimwe zvinhu zvinobatsira kuwana vatsva vatsva. Ndosaka bhizinesi richiramba richikura mushure megore.
Yako webhusaiti inogona kuve nezvakanaka zvemukati, kungofanana neiyo kofi shopu inogadzira yakanakisa kofi. Asi izvi hazvireve kuti chero munhu arikuuya! Pane akatiwandei mazano ekubatsira kukura bhizinesi rako raunofanira kushandisa:
Kutsvaga dzimwe nzira dzekugadzira kushambadzira kwemuromo ... kutaura pane mamwe masaiti, mishandirapamwe yehutachiona, paruzhinji, blog makadhi ebhizinesi, kutora chikamu mumasocial network, mumagariro bookmark, kubatanidza kune mamwe masaiti (muchinjiro-wekusimudzira).
Saiti yako iripi? Chakaita sei? Vanhu vanoiwana sei?
Paunenge uchivhura chitoro, chinhu chekupedzisira chauchazoita kuvaka mamaira mashoma kubva munzira huru uye kuvhura chivakwa chakakora. Iwe unofanirwa kuisa chitoro uko vanhu vanotarisira kuti chichava uye uko vanhu vanogona kuchiwana.
Iwe zvakare unoda kuvhura chitoro chakasununguka uye icho vanhu vanoda kudzoka kwachiri. Pane chitoro chemakomputa pasi pemugwagwa kubva kwandiri chandakafamba nacho asi ndisina kumbopinda machiri. Mukati macho munoita kunge imba yekuchengetera midziyo ine michina yakapararira pese pese. Asi kana ini ndikaenda muKutenga Kwakanyanya, ini handigone kubatsira asi kutsvedza pasi pamadziro eterevhizheni terevhizheni nguva dzese. Ini ndinoda kushanyira Best Buy zvakanyanya sekuda kwandinoda kutenga ikoko nekuda kwayo aesthetics.
Kushanya kwako kwekutanga kuchitoro changu chekofi uye iwe unoziva iwe hausi mu Starbucks. Kune mavara akajeka, matani emifananidzo, uye chiteshi chebhaista chakatarisana nevateveri pavanenge vachifamba mukati. Chiteshi ichi chiri zvakare chinhambwe kubva pamusuwo wepamberi, saka vanhu vane nguva yekuona kuti ndiani ari muchitoro uye osarudza pane yavo odha. Haisi iyo tambo yekugadzira shopu yakagadzirirwa kukumhanyisa kupinda nekubuda.
Pane mashoma mazano enzvimbo yako saiti uye marongero aunofanira kufunga nezvazvo.
Kugadzira nekushandisa nzira dzekutsvaga injini kuti vanhu vakwanise kuwana yako saiti. Izvi hazvireve kuti mubhadharo wekushambadzira - asi zvinoreva kunyoresa saiti yako ne Tsvaga Injini, kuendesa a Robots.txt faira kuunza mune yekutsvaga bots, uye kushandisa Sitemaps kupa chirongwa chekutsvagisa cheinjini dzekutsvaga nzvimbo yako, nekuzivisa mainjini ekutsvaga kana iwe ukaita shanduko, uye kunyora injini yekutsvaga inoshamwaridzika zvemukati.
Sarudza zita rakakura rezita. Ndiyo duraini iri nyore kuti vanhu varangarire, iyo .com yekuwedzera (ichiri kukosha nanhasi), uye ichishaya chero fungidziro. Vaya vanhu vachayeuka yourstore.com, asi ivo havasi kuzoyeuka bots-r-us.info. Dzimwe nguva madomeni akanakisa ndiwo mazwi akakosha auri kutsvaga. Mumwe muenzaniso: blog yangu yaizoita zvirinani muzvikamu zveSEO kana iro zita rezita raive ne 'kushambadzira' kana 'tekinoroji' mariri.
Aesthetics yenzvimbo. Iyo dhizaini uye theming yeyako saiti inoda kuratidza hunyanzvi uye hunhu iwe hwaunoda kuratidza. Ndaiwanzoti ndisafunganya nezve izvi - zvese zvaive pamusoro pezviri mukati. Ndakanga ndisina kururama, zvakadaro. Saiti hombe ari kuona kuwana mune traffic ne itsva yakagadzirwa. Unoda kuvhura Webhu saiti 2.0? Iva nechokwadi icho inoita kunge Webhu 2.0 saiti!
Vano chengeta sei vanhu pane yako saiti uye nekudzoka?
Iwe wakatumidza zita racho chaizvo, iwe une chaicho chakashambadzirwa, iwe wakaudza vanhu nezvazvo… ivo vari kutanga kuuya asi unozvichengeta sei? Kana iwe usina zvakakwana zvemukati uye marongero ekuchengeta vanhu vachidzoka, iwe uchazoshandisa yako nguva yese kutsvaga vashanyi vatsva pane kuchengeta vauinazvo.
Yakakura uye inomanikidza zvemukati izvo zvinofarira vaverengi vako zvichavachengeta vachidzoka.
Saiti yako ine RSS chikafu? RSS haisi imwe tekinoroji inotonhorera, iri zano rakanaka rekuchengetedza. Kunyangwe kana mumwe munhu asina kudzoka kune yako saiti kwechinguva, vanogona kugumburwa pairi mune zvavo zvekudya nguva nenguva - pamwe kana iwe uchipa izvo zvavari kutsvaga!
Ino saiti yako ine Email kunyorera sarudzo? Zvekare, ichi chishandiso chikuru chekuchengetedza, kuzivisa tarisiro yekufarira kana vatengi vakatoratidza kufarira (nekusarudza muemail yako).
Iko kune zvisiri izvo. Ini pachokwadi ndashandisa Prada mapiki pano nekuti ini ndawana chinyorwa kuchitoro chePrada pakati pekushayikwa… ndinofunga nzvimbo inotyisa inogona kunge iri mushandirapamwe wakanaka mazuva ano!
Tags: kuvaka chiwebsitecoffee shopinotongwa zitapradakuchengetwaSitezvemukati zvesaitichitoroWebsiteizwi remuromo